Paint amakhulu imibhobho ngezandla zakho kwiPeyinti Hit | I-Androidsis
I-Splatoon luthotho lwemidlalo yeNintendo yempumelelo enkulu kwaye umdlalo wayo wokudlala wawusekwe "kupeyinti". Kwi-Paint Hit kuyakufuneka "sipeyinte", nangona endaweni yoko ingumfanekiso oza kuguquka wenze izinto zibe nzima kakhulu kuthi. Umntu oqhelekileyo kwabo badibanisa kwaye, ke, siyathanda.
Siza kuqhubeka sinamakhasethi amaninzi okuhambahamba kwethu, kuba ingabo imidlalo egqibeleleyo ukudlala umdlalo 1 okanye 2 imizuzu ngexa silinde ukufika kwebhasi. Ukukhawuleza komdlalo yeyona nto ibalulekileyo kuyo, kwaye abaqulunqi bale nto kuthiwa yiPaint Hit bayazi kakhulu malunga noku.
1 Oomatshini abalula
2 Vula imibhobho eyahlukeneyo
3 Ukungahlali ixesha elihle
Ngokukodwa, i-Paint Hit isekwe ngokucinezela iscreen kuyo hamba upeyinte umbhobho umbala othile. Oomatshini basekwe kwinto yokuba kufuneka sisoloko siphumelela ukupeyinta okumhlophe, kuba ukuba siyenza nakweyiphi na imibala, umdlalo uza kuphela ukuze siqale omnye.
Ukwenza obu buchwephesha buntsokothe ​​kwaye bube nzima, kwiPaint Hill loo mbhobho izakujikeleza ukuze kuxhomekeke kwisantya sokujikeleza, kufuneka sicinge kakuhle xa kufuneka sikhuphe ibrashi yepeyinti. Kucace gca ukuba intshukumo yokujika kombhobho iya kuba yinto engalunganga, kunye nabo bajika isantya bayayeka kwaye bayonyuka ukuze ekugqibeleni singayifumani kakuhle kwaye siza kubona isikrini esonwabisayo sokuba siyafuna na ukubona intengiso ukuqhubeka. iyadlala ...
Kwaye ke umdlalo weqonga womdlalo lowo ekuqaleni kubonakala kulula kakhulu, kodwa njengoko siyidlala, kuya kusiba nzima. Ukuba kuko konke esidibanisa okungaphezulu kokufumana amanqaku ongezelelweyo ngezi zinto zegolide, izinto ziba nzima ngakumbi ukuze sibe nezakhono ngakumbi.
Vula imibhobho eyahlukeneyo
Ke ukuze yonke into ingathandeki, Ipeyinti ibethe kuthi izokuvumela ukuba uvule imibhobho emitsha, nanjengoko siza kube sigqibezela amanqanaba amatsha kunye "nabaphathi bokugqibela". Ayizizo ezo zinamehlo amakhulu, zijongeka zincinci, kodwa ngumbhobho oya kuthi ube ngumceli mngeni ngakumbi xa kufuneka ubethe ezo ndawo zimbalwa zingenanto. Ukuba sinobuchule ngokwaneleyo, siya kwinqanaba elilandelayo.
Ipeyinti yeHit inenani lilonke lamanqanaba ali-100, ke unemidlalo elungileyo ngamaxesha okudinwa kunye nokudinwa kwimihla yakho yemihla ngemihla. Njengokuba umsebenzi wokupeyinta unzima ngakumbi, siya kulufumanisa olo donga lokuqala umdlalo ngaphezulu. Ke kuya kufuneka jolise kakuhle ukugcwalisa ezo zithuba zingenanto. Ngendlela, inqanaba ngalinye ligqityiwe xa ulawula ukupeyinta inani elithile lamaxesha, ke akuyi kufuneka upeyinte umbhobho wonke, kodwa umyalezo ocetywayo kuwe.
Yintoni enomdla kukuba Baza kuzama ukumilisela uhlaziyo oluza kuzisa izakhiwo ezitsha, kuba le mibhobho, nokuba ingatshintsha umbala, inokuba kukudinwa okupheleleyo, kuba umnqweno wokuqhubeka nokudlala ngenene bubunzima bokuba inqanaba ngalinye linokuthatha. Ngapha koko, kuba yintoni, kuzisa ulonwabo ukuba nexesha elimnandi.
Ukungahlali ixesha elihle
Kwaye oku kungaphaya okanye kungaphantsi kwento ekuthiwa yiPeyinti Hit, yinto eyonwabisayo kunye nokuzonwabisa, njengabanye abaninzi, apho ku ukuba sinomphefumlo womzobi kwaye asifuni ukupeyinta ezo zendlu zethu, siya kuba nepeyinti eninzi esiza kuyimosha ngeselula yethu. Ngomnye wale midlalo ixesha elide kunye nenye into encinci, ke kuba isimahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, awulahli nto ngokuzama.
Ngokobuchwephesha kupholile, nangona ayimelanga nantoni na. Izinto ezibonakalayo zilungile, kodwa ngaphandle kwentshukumo, kwaye umdlalo weqonga ulula kwaye wenziwe kakuhle. Umdlalo ekuchithe ixesha elininzi ekuyileni amanqanaba kunakwenziwa imeko yemilingo ukuze sithathe ingqalelo yethu.
Ipeyinti yeHit yinto eqhelekileyo kwimidlalo elungileyo apho kuya kufuneka ubonise umphefumlo wakho njengomzobi ukubonisa ukuba uyazi indlela yokufumana ibrashi ngokufanelekileyo. Ndithe, unayo simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle.
Umthuthukisi: I-MAG Esebenzisana
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ukupeyinta kuye kwathiwa nge Paint Hit eqhelekileyo